Abavelisi benkqubo | KwiNkqubo yeeChina kunye nabaXhasi
I-EAS RF yoKhuseleko weSkena seSango Alarmum Alloyum Alloy Antenna-A209
Inkqubo ye-Optimum RF EAS yinkqubo esebenza kwi-8.2 MHz. Iyafumaneka njenge-Mono okanye yeNkqubo ezimbini, zombini ezi nkqubo zabelana ngeeprosesa ezifanayo kunye nomgangatho osebenzayo, kwaye isebenza kuzo zonke iiteki ezikhuselekileyo zeRF 8.2MHz kunye neelebheli ezithambileyo ze-EAS, ke ilingana nazo zonke iintlobo zevenkile zentengiso, ze umzekelo, indawo yokugcina iimpahla, ivenkile yezihlangu, iivenkile zeziyobisi njalo njalo.
Inombolo yomzekelo: A209
Uhlobo: inkqubo RF EA
Lobukhulu: 1660 * 420 * 42MM
Ukusebenza kweVoltage: 110 ~ 230V 50 ~ 60HZ
Inkqubo ye-EAS ye-RF EAS 8.2mhz ye-RF yoKhuseleko lwe Supermarket yoMnyango we-Antenna-PG308
Ukudityaniswa kwenkqubo ye-RF yendlela yakudala, ukufunxa ubuncinci besekethe yokuqhubekeka kwedijithali, yimveliso ebiza iindleko. Kwaye le modeli ye-acrylic ye-RF inokuhambelana nebhodi ye-RFB eyahlukeneyo. Ngokukodwa, ukudityaniswa kombala oBomvu we-LED's - ezinokusetwa ngokusisigxina okanye kuphela xa i-eriyali yothukile- ilungile kwabo bathengisi bafuna uyilo oluphezulu ngaphandle kokuncama ukusebenza. Yeyona antenna yethu ithandwa kakhulu yiRF. Ukufakwa kwayo ngokulula, okunomdla, kokuchonga ukusebenza okuphezulu, uzinzo oluhle, iimpawu ezinesantya sokusilela eziphantsi ziyenza ilingane ngaphandle kwemthungo kwiindawo ezininzi.
Inombolo yomzekelo: PG308
Lobukhulu: 1518 * 280 * 20MM
Ivenkile yokuThengisa ye-EAS 58khz AM Ivenkile yokunxiba iAlarm Anti-theft Aystem Gate-PG400
Inkqubo egqibeleleyo, enamandla ye-AM eyilelwe kugxilwe ekufumaniseni ngokuqinileyo iilebhile zokubambelela, ukuthembeka, kunye nokuguquguquka. Le nkqubo ye-AM yentsimbi ilungele nayiphi na imeko, kunye nokusebenza okuphezulu kwintengiso yezokhuseleko.
Inkqubo ye-AM igqwesa ekungeneni okukhulu okanye okuninzi apho igqwesa khona uninzi lwabakhuphisana nayo, kwaye kunye nesakhelo se-ABS sanamhlanje somelele kodwa sinomtsalane kakhulu, sinendawo yezibhengezo zentengiso.
Inombolo yomzekelo: PT309
Uhlobo: Inkqubo ye-EAS AM
Lobukhulu: 1560 * 420 * 20MM
Inkqubo ye-EAS ye-Antenna AM Acrylic umgangatho ophakamileyo we-58KHz yeeVenkile zoKhuseleko lweSango-PG212A
Uyilo lwabo olunomtsalane kunye netekhnoloji yedijithali ebalaseleyo yenza uluhlu lwethu lwee-eriyena sisisombululo esaziwa kakhulu kwintengiso yeemfuno zokhuseleko lokuthengisa. Ii-eriyali zethu zomelele, ziyilwe kakuhle kwaye zomelele ngokwaneleyo kwezona ndawo zifunwa kakhulu ziindawo zentengiso.
Inombolo yomzekelo: PG212A
Lobukhulu: 1500 * 370 * 20MM
Ukhuseleko lwe-EAS ye-EAS AM i-58khz ye-EAS yeNkqubo yokuBiwa kweMpahla yeeVenkile ze-Antenna-PG218
Le nkqubo ye-EAS yitekhnoloji ye-AM 58KHz eneempawu zokugubungela ngokubanzi (ukuya kuthi ga kwi-2.5 m) kunye novakalelo oluphezulu. Uyilo lwayo olungafihlisiyo kunye noluyilo oluvulekileyo lufanelekile kuyilo lwevenkile ehambisa ukufumaneka kokulula kunye nokuthembeka kwisisombululo esinomtsalane, esifikelelekayo se-EAS.Into ethile
Inombolo yomzekelo: PG218
Lobukhulu: 1500 * 340 * 20MM
Ivenkile yokuThengisa ye-EAS 58khz AM Ivenkile yokunxiba iAlarm Anti-theft Aystem Gate-PT309
Le nkqubo ye-AM isebenza kumgaqo wokuba umthumeli athumele umqondiso kuqhushumbo olunika amandla iithegi ngaphakathi kommandla wentsika. Xa ukubetha kuphelile, ithegi iyaphendula. Phakathi kokugqabhuka, umqondiso wethegi ubhaqwa ngumamkeli. Ke ngoko, ukuba ithegi esebenzayo iyadlula phakathi kweziseko, ialam iya kukhala.
INKQUBO ye-EAS AM Inkqubo ye-Acrylic Umgangatho ophezulu we-eas 58KHz Isinxibo seVenkile yoKhuseleko yeSango-PG300
Into iphawulwe okanye ibhalwe i-eriyali enye okanye ezingaphezulu, zihlala zibekwe kufutshane nokuvula ivenkile, zinxibelelana nazo xa zingena kuluhlu, zilumkisa ulawulo lwevenkile xa umntu othile ezama ukususa into kwivenkile ngaphandle kokuqhutywa ngokufanelekileyo.
Inombolo yomzekelo: PG300
Lobukhulu: 1500 * 306 * 20MM
Inkqubo yoKhuseleko lweevenkile zeAnti ye-Anti-Alarm ye-AM 58khz EAS i-Antenna-PG200
Inkqubo yokuchonga inezinto zobuchwephesha ze-Etagtron AM EAS kwelona nqanaba liphezulu lokufumana ubusela ukuya kuthi ga kwi-2.5m (8ft 2in) yokugubungela indawo ebanzi okanye yokuphuma okuninzi.Uyilo olucekeceke, olunqamlezileyo, oluvulekileyo lwakhiwe nge-acrylic ekumgangatho ophezulu, ukugcina ivenkile. i-aesthetics kunye nokuzisa ukujongwa okufanelekileyo phantse kwayo nayiphi na indawo yokuthengisa.
Inombolo yomzekelo: PG200
Lobukhulu: 1500 * 200 * 20MM
Umbala: ngwevu / mhlophe
Isango le-UHF RFID laBantu lokuLawula ukuFikelela kunye nokuKhangelwa kweeAsethi-PG506L
Ii-Antennas zeRFID zinoxanduva lokukhupha kunye nokufumana amaza asivumelayo ukuba sibhaqe iichips zeRFID. Xa i-chip yeRFID iwela ibala le-eriyali, iyasebenza kwaye ikhuphe uphawu. I-eriyali zenza amasimi ahlukeneyo amaza ahamba imigama eyahlukeneyo.
Uhlobo lwe-Antenna: Iijenali ezijikelezayo zesahlulo zisebenza kakuhle kwiindawo apho ulwahlulo lwethegi luyahluka. I-eriyali ye-eriyali ye-eriyali isetyenziswa xa ulwazelelo lweethegi laziwa kwaye lilawulwa kwaye luhlala lunye. I-NF (kufutshane neNdawo) ii-eriyali zisetyenziselwa ukufunda iithegi zeRFID ngaphakathi kweesentimitha ezimbalwa.
Inombolo yomzekelo: PG506L
Uhlobo: Inkqubo yeRFID
Lobukhulu: 1517 * 326 * 141MM
Ilebheli yoKhuseleko lweLebhu ye-Deactivator ye-AM 58Khz EA EA AM Label-CT580
Jonga umgca wethu opheleleyo wee-deactivators ezinokuthenjwa ezihambisa ukusebenza okuphuculweyo kwelebheli ezichasene nobusela ukunceda ukukhusela ukuthengisa kunye nokunciphisa ii-alamu zobuxoki ekuphumeni kwakho.
Inombolo yomzekelo: CT580
Lobukhulu: 230 * 200 * 78MM
Ukunikezelwa kwamandla: Igalelo le-220VAC, Isiphumo se-18VAC